MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Shanaffaa – Welcome to bilisummaa
Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Barreeffama kana kutaa sadaffaa, kunoo akkana jechuunan xumureeyyu: “Amma gara wiirtuu dubbii Dr. G. Hayilee sanatti yoo deebine, mee maaluma-laa qaroominni Amaaraa kan inni Oromoo fi Muslimootatu barbadeesse nuun jedhu kun? Innii fi illiitonni isaanii kaan, amma gara seenaa waggalee 400 fi 500-ii faatti deebiyuun kan uummata Oromoo fi Muslimoota Toopphiyaa kabajamoo irratti waraana banan, Toopphiyaa isaanii tana ijaaru fi moo diiguufi? Jarri kun uummata Oromoo isa walakkaa uummatoota Toopphiyaa kan barana lakkoofsaan kitila 92 (92 000 000) tahee, jechuun kitila 46 (46 000 000) fi sana irratti uummattoota Toopphiyaa kana keessaa, Muslimoota dhibbayyaa 50 (“50%”) fi dabreeyyuu, uummatoota Kibbaa maratti summii tuttufuun maal akka isaanii fiduufi? “Yaa qotiyyoo gowwaa, marga malee hin agarre bowwaa!”, jedha Oromoon waan akkanaa-tiin. Mee amma kutaan kun akka nutti hin dheeranneef, asuma irratti haa dhaabnu! Kutaa kanatti aanee dhufu keessatti, erga muummiyyeewwan Amaaraa duula hamaa fi jibbisiisaa: uummata Oromoo fi Muslimoota Gaafa Afrikaa irratti bananii seenaa Oromoos, seenaa Muslimoota keenyaas bardhibbee 16-ffaa fi bara Ahimad Giraanyi duraa irraa kaasuun dhugaa fi dhugoo irratti hundeeffamuun ibsamaatii, mee hammasitti nagaa fi nageenyi qeyee keessan irraa hin dhabamini!”
Dursee qaroomina jechuun maal maal faa akka tahe, barreefama kana kutaa afraffaa irratti walumaan ilaallee turre. Muummiyyeewwan (illiitonni) Amaaraa kun qaroomina dhuunfaa mataa isaanii godhachuun nu uummatoota impaayerittii isaanii keessatti argamnu callaa otoo hin taane, Misira irraa kan hafee uummatoota Afrikaa mara “qaroomina maleeyyii” nu taasisanii argamu. Jarri kun of-tuulummaa fi sanyummaan ija of-cufanii jiru. Sanyummaan dhibee hamaa, naqarsa, isa qoricha hin qabne waan taheef isaan barabaraan dhibee kanaan dararamaa jiru. Dhibee hamaa kanatu fakkeenyaaf ija barateessaa Amaaraa, Dr. G. Hayilee cufee akka inni qaroomina Oromoo keessaa sirna Gadaa faa hin mildhanne isa taasise. Kanatu nama kana ilaafilaamee (dimokiraasii) Gadaa, isa addunyaan raajeffatu “maafiyaa dha“, isa jechisiise. Namtichi kun waan maafiyaan tahe, baargama cewuun, Biyya Xaaliyaanii keessa labee beekaa, biyyuma Gadaa keessa uumarii isaa gara irra-caalu jiraatee, waan Gadaan tahe hin beeku. Kan kana akka hin beekne isa taasise namummaa isaa otoo hin taane, sanyummaa isaati.
Kana irratti idayamuu kan qabu waayee bunaati. Bunnis kan naannoo gammoojjiitti biqiluu miti. Bunni naannoo baddadareetti kan margu yookaan kan dhaabamu. Oromoon akka garbuutti isa waliin “waaqarraa lafatti buune“, jechuu baatullee akkuma garbuu faa aadaa fi duudhaa isaa keessatti bunnis bakka olaanaa qaba. Aadaa fuudhaa-heerumaa, ateetee, ayyaana waggaa, shanan dubartii deessee, araara fi eebba faa biraa bunni hin hafu. Oromoof bunni asxaa nagaa-ti. Akkuma coqorsi asxaa jireenyaa tahe bunnimmoo mallattoo nagaa tahee, Oromoo fi nu dhalawwan isaa biraa hafuu didee biyyambaa kanas nu waliin jiraata. Dr. G. Hayilee bunnis kan “tiksee“-ti jechuun isaa ni mala. Ee, uummanni isaa aadaa bunaa waan hin qabneef, waan bara dhiyoo warra “tiksee” kana irraa barateef, ammas akkuma qeesota isaanii jara durattii: “waan Gaallaa kana akka hin tuqneef, waan Islaamaa kana akka harkaan hin qabanneef, maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin isin magannee jirra (“basima-aab, basima-waldi, basima-manfas qiddus gazzitanaal)!” Akka nuun hin jenne.
Kanaa olitti waayee garbuu fi waayee qonnaan-buluu Oromoo durii durii kaafnee turre. Oggaa gosooliin Seem sadii Arabiyaa Kibbaa irraa Garba Diimaa cewuun dachee Kuushotaa irra miilli isaanii hin ijjatin, naannoon Biyya Habashaa isa ammaa kana, Oromiyaa fi naannoon uummatoota Kibbaa kun qonnaan hedduu kan beekamu ture. Kun Ertiraa Kibbaas ni dabalata. Kunoo, midhaan harra Habashoonni akka waan isaan irraa maddeetti dhiyeeffatan: xaafii, nuugii, garbuu fi ajjaa faa koolu-galtuu tahuun otoo isaaan hin dhufin, warra Kuushotaatiin bara dhibba meeqaa fi meeqa dura hoomishamaa turani. Adaala (“desert“) Arabiyaa irraayyi finnee dhufne, akka jedhanii nu hin kofalchiifne, ni abdanna. Kanneen keessaa kan akka xaafii fi nuugii aadaan qonna isaas, jechi sagalee isaas Afaanota Kuushii irraa kan ergifatame. Maali isaan midhaan akkuma garbuu naannoo baddaatti margu sanaan, jechuun ajjaa-dhaan (kunis Afaanuma Oromoo fayi) hanga dhiyootti “YeGaallaa gabsi” jedhuun ture mitii?
* Namoonni keenya gariin jecha Oromoo isa “jaarraa” jedhamu, jecha Afaan Ingilizii isa “century” jedhamuuf kennu. Garuu, sirna Gadaa keessatti “jaarraa” jechuun waggaa 40, ilmi abbaa isaa booda dhufuun abbaa bokkuu faa tahuu dandawu sana. Isa kana ammas akkanumatti jechuun waggaa 40-f dhimma ittiin bawuu qabna. “Century“-f immoo jecha “bardhibbee” jedhamu qabna. Akkanuma:barkurnee = “decade“, barkumee = “millennium“.
Previous Looking back into the Oromo history, the case of Gujii-Borana
Next Maalif Maqaan tokko lama taha laata!